Golaha Amniga ee Midowga Afrika oo leh kulan ku saabsan Badda Soomaaliya & Soomaaliya oo ka baxday shirka.
ADDIS ABABA(P-TIMES) – Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika oo ah mid ay ku mideysan yihiin dhammaan xubnaha golaha Midowga Afrika ayaa galabtay dood ka yeeshay arrimaha ku saabsan dalab ay soo gudbisay dawladda Kenya oo ku wajahan in ay Afrika gudaheeda khilaafkooda ku xalistaan Soomaaliya oo ay sheegtay in ay isku hayaan badda u dhaxeysa labada dal.
Golaha Amniga iyo nabadda ayaa bilaabay ka hadlida qodobada ku xusan qaraarka ay soo gudbisay dawladda Kenya oo horey guddi loogu saaray, waxaana Soomaaliya ay diiday in ay guddigaas kala hadasho arrimaha ku saabsan xagga badda ee ay isku hayaan Kenya.
Ergada Soomaaliya ee xarunta Midowga Afrika ayaa ka baxay kulankan oo socda, waxayna muujiyeen sida aysan marnaba raali uga aheyn in arrimahan ay ka wada hadlaan Kenya, waxaana muuqata in ay hadda Xukuumadda Nairobi isticmaalayso arrimaha midowga Afrika.
Golahan waa 15 dal, waxaa bariga Afrika uga jira Rwanda, Kenya iyo Jabuuti, waxaana ay doonaysaa in ay Kenya adeegsato talaabada cod ee ay hadda golahan ku leedahay, waxayna sidaas oo kale qorsheynaysaa talaabooyin dheeraad ah oo ku wajahan arrimahan.
Soomaaliya ayaa doonaysa oo kaliya in lagu kala baxo Maxkamadda Cadaaladda Aduunka oo dacwadeedu bilaabanaysa 9-ka bishan, waxayna Kenya doonaysaa in ay sameyso mar-marsiiyo waqtiga lagu dheeraynayo.
Kenya, warar hordhac ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in ay wax kasta u isticmaalayso sidii ay meelmar uga dhigi lahayd qadiyadeeda ku wajahan in ay Badda Soomaaliya sii haysato, ayna sii wado ficilada la xariira arrimaha Badda ee Soomaaliya.